Maaskarada wajiga ee loo yaqaan 'Face face KN95' oo madax ku xiran iyo warshadleyda | Gubang
Shaandheeya ugu yaraan 95% walxaha hawada kujira.
Qaabka naqshada madaxa
Teknolojiyada alxanka Ultrasonic, oo aan xabag lahayn oo aan ur lahayn
1. Dhaq gacmahaaga ka hor intaadan xiro maaskaro, ama iska ilaali inaad taabato dhinaca gudaha ee maaskaro markaad xiranayso maaskaro si loo yareeyo suurtagalnimada faddarada maaskarada.
3. Isku day inaad ka dhigto maaskaro wejiga si wanaagsan. Qaabka tijaabada ee ugu fudud ayaa ah: Ka dib marka aad maaskaro gashato, si xoog ah u soo bax si hawo aysan uga soo daadan karin carada maaskaro.
4. Maaskarada kahortaga waa in ay xiriir dhow la leedahay wejiga isticmaalaha. Isticmaaluhu waa inuu xiiraa gadhka si loo hubiyo in maaskarada ay si adag wejiga ula gasho. Gadhka iyo wax kasta oo la dhigo inta u dhexeysa goomaha wejiga iyo wejiga ayaa sababi doona maaskarada inay daato.
5. Ka dib markaad hagaajiso booska maaskarada iyadoo loo eegayo qaabka wajigaaga, isticmaal faraha farta labada gacmood si aad ugu cadaadiso sanka geesaha wejiga kore ee maaskaro si aad ugu dhawaato wejiga.
Shaandheeyaashu waxay soo baxaan ilaa 95% qayb ka mid ah, iyagoo bixiya ka-hortag qaali ah oo ka dhan ah walxaha hawada ku jira, wasakheynta iyo boorka.
Xadhkaha laastikada sare ee hubiya cufnaanta jilicsanaanta.
Si fudud u laab laabi oo kula qaado.
Waxaa laga sameeyay waxyaabo raaxo leh, oo wajiga u fiican.
KN95 waa maaskaro horumarsan oo awood u leh inuu kala saaro ilaa 95% walxaha aan saliida lahayn ee hawada ku jira. Tan waxaa ka mid ah siigada iyo dhowr waxyaalood oo kale oo hawadu ka qaado.
Maaskarada waxaa loogu talagalay inay kaa ilaaliso walxaha waxyeelada u geysan kara hawada ayna hubiso inaad ku neefsato oksijiin nadiif ah. Wuxuu yimaadaa 10 qaybood oo xirmo ah.
KN95 wuxuu kala sifeeyaa ugu yaraan 95% walxaha ku dhaca inta udhaxeysa 0.3 micron iyo wixii ka sareeya. Soo saaraha maaskaro N95 ayaa qormooyinkooda ku diiwaangeliyey in maaskarada 'KN95' ay beddel weyn tahay. Waxay sameysaa shaabad markii ay sifiican u daboosho sanka iyo afka si loo yareeyo halista cudurka.
Hore: Warshadda jumlada Oem Ffp2 Ffp3 Mask - Maaskaro wajiga KS-9005 - Gubang
Xiga: Maaskaro wajiga KN95 oo leh waalka
Warshadda Maaskarada Wajiga Kn95
Maaskaro Waji Kn95 Bixiyaha
Maaskarada Weji Kn95 Shirkado
Kn95 Warshadda Maaskarada Wajiga
Maaskarada Wejiga P2 Kn95